Bollywood – Page2– सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
हटाइयो भारतीय फिल्ममाथि लाग्दै आएको प्रतिबन्ध
इस्लामाबाद । पाकिस्तानमा भारतीय फिल्ममाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटेको छ । यो सँगै सोमबारदेखि फिल्महलमा पुनः बलिउडका फिल्मले स्थान पाउने छन् । पाकिस्तानका फिल्म वितरक र सिनेमाघरका मालिकहरुले सोमबारदेखि बलिउड फिल्मले स्थान पाउने जानकारी दिएका हुन् । भारत र पाकिस्तानबीच बढ्दो तनाबकाबीच गत सेप्टेम्बरमा भारतीय फिल्ममाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । काश्मिरको उरीमा भएको हमलापछि भारतले पाकिस्तानी […]
Posted in: Bollywood, mainNews, Manoranjan
अमिर खानकी पत्नीका ८० लाखका गहना चोरी
मुम्बई । मुम्बईको बान्द्रास्थित अमिर खानकी पत्नीको घरबाट ८० लाख बराबरका गहना चोरी भएका छन् । अमिरकी पत्नी किरण रावका नातेदारले गहना चोरी भएको उजुरी प्रहरीमा दर्ता गराएका हुन् । प्रहरीले घटनाबारे छानविन सुरु गरेको जनाइएको छ । अमिर खान र किरण राव कार्टर रोडस्थित एक अपार्टमेन्टमा बस्छन् । उनले गत सातामात्रै आफ्नो हिराको औठी […]
बलिउडमा नायक र नायिकामा कति विभेद छ ?
मुम्बई । के अभिनेत्री अर्थात नायिकालाई काम कम मात्रै पाइन्छ र नायकको कुनै निश्चित मिति (एक्सपायर डेट) हुँदैन ? यस विषयमा अभिनेत्री धुपिया काफीले सोलोढोलो उत्तर दिइरहेकी थिइन् । तर उनकै साथमा बसेका अभिनेता रणवीर शौरीले त्यसलाई पुष्टि गरेका छन् । उनले भने, ‘यस्तो विभेद हाम्रो व्यापारमा मात्रै होइन हरेक क्षेत्रमा महिलालाई मौन रुपमा दोस्रो […]
लुटिइन् बलिउड अभिनेत्री मल्लिका सेरावत
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री मल्लिका सेरावतमाथि पेरिसस्थित अपार्टमेन्टअघि तीन जना व्यक्तिको समूहले कुटपिट गर्नुका साथै लुटेको छ । फ्रान्सको अखबार ‘ले पेरिसियन’ लाई उल्लेख गर्दै ‘टेलिग्राफ’ ले खेलेको छ ४० वर्षीय अभिनेत्री र उनका पुरुष साथीमाथि टियर ग्याँस छोड्नका लागि मुक्का प्रहार गरेका थिए । यो घटना केही साता अघि पेरिसमा रियलिटी टीभी स्तार किम […]
दुई बच्चाकी आमा काजोल यसरी बन्दैछिन ‘एकल आमा’
मुम्बई/एजेन्सी– चर्चित बलिउड अभिनेत्री काजोल आफ्नो आगामी फिल्ममा बच्चाको हेरचाह गर्ने एक्लो अभिभावक अर्थात आमाको भूमिका निर्वाह गर्न उत्साहित रहेको बताएकी छन् । यो फिल्मको शुटिङ सन् २०१७ को सुरुदेखि नै हुनेछ । निर्देशक आनन्द गान्धी आफ्नो एक नाटकका विषयमा फिल्म बनाउने तयारीमा छन् । जसमा काजोल मुख्य भूमिकामा रहेकी छन् । ‘शिप अफ थिसस’ […]
पाकिस्तानमा भारतीय च्यानल र चलचित्रमा रोक
एजेन्सी । पाकिस्तानमा भारतीय टेलिभिजनको प्रशारणमा रोक लगाइएको छ । पाकिस्तानी मिडिया नियामक निकायले सबै भारतीय च्यानलको प्रसारणमा रोक्न निर्देशन दिएको हो । पाकिस्तान इलेक्ट्रोनिक मिडिया रेगुलेटरी अथोरिटी (पीईएमआरए) ले एक वत्तव्यमा स्थानीय निजी च्यानलमा विना स्विकृतति भारतीय मिडियाका अन्तर्वार्ता, रियलिटी शो र धाराबाहिकको प्रसारण भइरहेको भन्दै तत्काल रोक्न निर्देशन दिइएको छ । भारत र […]
Posted in: Bollywood, International News, Manoranjan
रणवीर र दीपिकालाई आइफा अवार्ड, अन्य क–कसले पाए ?
मड्रिड । स्पेनको मड्रिडमा भएको आइफा अवार्ड समारोहमा सञ्जय लीला भन्सालीको फिल्म ‘बाजिराब मस्तानी’ ले बर्चश्व कायम गरेको छ । बाजिराव मस्तानीले सबै गरेर एक दर्जन अवार्ड जितेको छ । सर्वश्रेष्ठ अभिनेताको अवार्ड ‘बाजिराव मस्तानी’ मस्तानीका लागि रणवीर कपुरले जितेका छन् भने उत्कृष्ठ अभिनेत्रीको उपाधी ‘पीकु’ कि नायिका दीपिका पादुकोणले जितेकी छन् । अवार्ड समारोहमा […]
Posted in: Bollywood, ManoranjanLeaveacomment
‘शिवाय’, र ‘मोहनजोदडो’ को पोष्टर सार्वजनिक
मुम्बई । बलिउडका चर्चित अभिनेता अजय देवगनको फिल्म ‘शिवाय’ र ऋतिक रोशनको फिल्म ‘मोहनजोदडो’ को पोष्टर सार्वजनिक भएको छ । यसअघि नै दुबै फिल्मका मुख्य अभिनेताहरुको पोष्टर सार्वजनिक भएको थियो । दुवै फिल्मका अभिनेत्रीहरु बलिउडमा डेब्यु गर्दै छन् । आशुतोष गोवारिकरको निर्देशनमा बनेको फिल्म ‘मोहनजोदडो’ की अभिनेत्री पूजा हेगडेको पहिलो बलिउड फिल्म हो । यसअघि […]